News - Tilmaamaha Buuxda ee Qiimeynta IP-Biyuhu - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Tilmaamaha Buuxda ee Qiimeynta IP-Biyuhu - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7
Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay alaab ay ku qoran tahay calaamado ama baakadaha ay wataan, sida IP44, IP54, IP55 ama kuwa kale oo la mid ah. Laakiin miyaad ogtahay waxa macnahoodu yahay? Hagaag, kani waa koodh caalami ah oo matalaya heerka ilaalinta sheyga ee ka hortagga soo gelitaanka walxaha adag iyo dareerayaasha. Maqaalkan waxaan ku sharixi doonnaa waxa IP macnaheedu yahay, sida loo akhriyo lambarkaas iyo sidoo kale waxaan si faahfaahsan ugu sharxi doonaa heerarka ilaalinta ee kala duwan.
Hubinta Qiimeynta IP Marabtaa inaad ogaato waxa loola jeedo qiimeynta IP-ga ee alaabtaada? Adeegso hubiyahaan oo wuxuu soo bandhigi doonaa heerka ilaalinta.
Badeecad leh qiimeyn IP00 ah lagama difaaco walxaha adag lagamana ilaaliyo dareereyaasha.
Waa maxay macnaha IP Rating? Qiimeynta IP-ga waxaa loola jeedaa Qiimeynta Ilaalinta Ingress (oo sidoo kale loo yaqaan Calaamaynta Magangalyada Caalamiga ah) oo mataleysa nambarka ay soo saaruhu u baahan yihiin inuu caddeeyo si uu macmiilku u ogaado haddii sheyga laga ilaalinayo soo-dhexgalka jajabyada gobolka adag ama dareeraha. Qiimeynta lambar waxay ka caawineysaa dadka inay si fiican u daryeelaan alaabada ay iibsadaan iyo inay ogaadaan sida loogu kaydiyo xaaladaha habboon. Inta badan soosaarayaasha korantada waxay cadeeyaan faahfaahinta qalafsan ee laxiriira alaabtooda, laakiin Qiimeynta IP-ga ayaa aad ufududeyn laheyd in la fahmo haddii dadka lagu wargaliyo. Koodhka IP-gu waa aalad hufan oo ka caawin karta qof kasta inuu iibsado alaab tayo wanaagsan leh, iyada oo aan lagu marin habaabinin jargon iyo caddayn aan caddayn. Ilaalinta Ingress waa qiimeyn heer sare ah oo laga aqoonsan yahay adduunka oo qof walba isticmaali karo, iyadoon loo eegin meesha uu ku yaal. Heerarkan korantada farsamada casriga ah waxaa loo sameeyay si dadka loogu ogeysiiyo awoodaha dahaarka sheyga uu leeyahay, laga bilaabo biyaha ilaa ilaalinta sheyga adag. Nambarku wuxuu u egyahay sidan: nooca gaaban ee 'Ingress Protection', oo ah IP, oo ay ku xigto laba lambar ama xarafka X. Lambarka koowaad wuxuu matalaa iska caabinta shayga ka dhanka ah walxaha adag, halka kan labaadna uu matalayo difaaca laga bixiyo dareerayaasha. Xarafka X wuxuu muujinayaa in sheyga aan lagu tijaabin qeybaha uu ka kooban yahay (kuwa adag ama dareeraha). Ilaalinta Shayga adag Kahortaga sheyga elektiroonigga ah ee ka dhan ah walxaha gobolka adag waxaa loola jeedaa gelitaanka qaybaha halista ah ee ku jira alaabta. Qiimeynta waxay ka bilaabaneysaa 0 ilaa 6, halkaas oo 0 micnaheedu yahay wax difaac ah haba yaraatee. Haddii sheygu leeyahay shey adag oo ilaalin kara 1 ilaa 4, waa laga ilaaliyaa walxaha ka weyn 1mm, gacmaha iyo faraha ilaa qalab yar yar ama fiilooyin. Ilaalinta ugu yar ee lagu taliyay waa heerka IP3X. Kahortaga walxaha boodhka, sheyga waa inuu muujiyaa ugu yaraan halbeegga IP5X. Guntin boodhku waa sababta ugu weyn ee waxyeellada u leh korantada, markaa haddii sheyga loogu talo galay in loo isticmaalo meelaha boodhka leh, IP6X, ilaalinta ugu badan ee la hubo, waa inay lagu daro. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan ilaalin galinta. Aad ayey muhiim u tahay in la doorto Qiimeynta ugu habboon ee IP ee alaabta elektaroonigga ah, maxaa yeelay tani waxay saameyn ku yeelaneysaa badeecadda u adkeysiga xiriir koronto oo la soo dallaco, taasoo u horseedi karta wax soo saar waqti go'an. Qaybaha elektaroonigga ah ee lagu daboolay filimada polymeric khafiifka ah ayaa iska caabiya xaaladaha deegaanka ee boodhka badan.
0 - Wax difaac ah lama hubo
1 - Ka hortagida walxaha adag ee ka weyn 50mm (tusaale gacmaha).
2 - Ka hortagida walxaha adag ee ka weyn 12.5mm (tusaale ahaan faraha).
3 - Badbaadinta la hubo ee walxaha adag ee ka weyn 2.5mm (tusaale ahaan fiilooyinka).
4 - Badbaadinta la hubo ee walxaha adag ee ka weyn 1mm (tusaale qalabka iyo fiilooyinka yaryar).
5 - Laga ilaaliyo tiro boodh ah oo faragalin ku yeelan karta shaqada caadiga ah ee badeecada laakiin aan si buuxda carada u adkeyn. Kahortaga walxaha adag.
6 - Si buuxda boodhka u adkee oo ka ilaali walxaha adag.
Ilaalinta dareeraha ee dareeraha Waxaa la mid ah dareerayaasha. Ilaalinta dareeraha ilaaliyaha dareeraha sidoo kale waxaa looyaqaanaa ilaalinta qoyaanka oo qiyamka waxaa lagaheli karaa inta udhaxeysa 0 iyo 8. Waxaa 9km oo dheeri ah lagu daray dhawaanahan koodhka ilaalinta Ingress. Sida kiiska kor ku xusan, 0 macnaheedu waa in sheyga aan laga ilaalinayn sinaba uga soo galida walxaha dareeraha ah ee kiiska ku dhex jira. Wax soo saarka biyuhu qasab maahan inay is hortaagaan marka biyaha hoostooda la dhigo muddo dheer. Soo-gaadhista qaddar yar oo biyo ah ayaa ku filan in lagu waxyeeleeyo wax soo saarka leh Qiimaynta IP-ga oo hooseeya. Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay alaabooyin leh qiimeyn sida IPX4, IPX5 ama xitaa IPX7. Sidaan horay u soo sheegnay, lambarka ugu horeeya wuxuu u taagan yahay ilaalinta sheyga adag laakiin had iyo jeer shirkadaha wax soo saara ma tijaabiyaan wax soo saarkooda ku tumashada boodhka. Taasi waa sababta lambarka ugu horreeya si fudud loogu beddelay X. Laakiin taasi macnaheedu maaha in sheyga aan laga ilaalinaynin boodhka. Hadday leedahay difaac ka hortag ah oo wanaagsan oo biyaha markaa waxay u badan tahay in laga ilaaliyo boodhka sidoo kale. Ugu dambeyntii, qiimaha 9K waxaa loola jeedaa alaabooyinka lagu nadiifin karo iyadoo la isticmaalayo uumiga isla markaana taageeraya saameynta diyaaradaha cadaadiska sare leh, iyadoo aan loo eegin jihada ay ka yimaadeen. Sidaan horeyba u soo sheegnay, badeecada ku qoran IPXX, wax tijaabo ah lama sameyn si loo ogaado in badeecaduhu yihiin biyo iyo boodh u adkaysta iyo in kale. Waa muhiim in la fahmo in qiimeynta XX aysan macnaheedu ahayn in sheyga aan la ilaalin gebi ahaanba. La xiriirida soo saaraha oo marwalba aqriso hagaha isticmaalaha waa qasab kahor inta aan qalabka elektarooniga ah lagu xirin xaalado gaar ah.
0 - Wax difaac ah lama hubo.
1 - Badbaadinta la hubo ee dhibcaha toosan ee biyaha.
2 - Badbaadinta la hubo ee dhibcaha toosan ee biyaha marka badeecaddu u janjeerto illaa iyo 15 ° meeshiisii ​​caadiga ahayd.
3 - Badbaadinta la hubo ee ku buufin biyo toos ah xagal kasta oo gaadha illaa 60 °.
4 - Badbaadinta la hubo ee ka soo biyo shubashada xagal kasta.
5 - Badbaadinta la hubo ee ku saabsan diyaaradaha biyaha ee ay saadaalinayaan mashiinka (6.3mm) xagal kasta.
6 - Badbaadinta la hubo ee ka imanaya diyaaradaha biyaha ee xoogga leh ee lagu saadaaliyay bir (12.5mm) xagal kasta.
7 - Badbaadinta la hubo ee ka-miiridda biyaha qoto dheer inta u dhexeysa 15 cm iyo 1 mitir ugu badnaan 30 daqiiqo.
8 - Badbaadinta waxaa lagu xaqiijinayaa muddada dheer ee biyo-biyoodka qoto dheer oo ka badan 1 mitir.
9K - Badbaadinta la hubo ee ka timaadda saamaynta diyaaradaha cadaadiska sarreeya iyo nadiifinta uumiga.
Micnaha Qaar ka mid ah Qiimeynta IP-ga ee guud
IP44 —— Badeecad leh qiimeyn IP44 ah waxay ka dhigan tahay inay ka ilaalineyso walxaha adag ee ka weyn 1mm iyo biyaha ka soo daadanaya dhinacyada oo dhan.
IP54 —— Badeecad leh qiimeyn IP54 ah ayaa laga ilaaliyaa soo-gelinta boodhka oo ku filan si looga hortago in badeecaddu u shaqeyso si caadi ah laakiin ma aha mid si adag u adag. Shayga ayaa si buuxda looga ilaaliyaa walxaha adag iyo ka biyo daadinta xagal kasta.
IP55 —— Shayga IP55 ee la qiimeeyay waa laga ilaaliyaa soo gelida boodhka oo waxyeello u geysan kara howlaha caadiga ah ee badeecada laakiin aan si buuxda u adkeynin boodhka. Waxaa laga ilaaliyaa walxaha adag iyo diyaaradaha biyaha ee lagu saadaaliyay biiyaha (6.3mm) jiho kasta.
IP65 —— Haddii aad aragto IP65 oo ku qoran wax soo saar, tani waxay ka dhigan tahay inay si buuxda boorka u adag tahay lagana ilaaliyo walxaha adag. Waxaa intaa dheer waa laga ilaaliyaa diyaaradaha biyaha ee lagu saadaaliyay biiyaha (6.3mm) xagal kasta.
IP66 —— Qiimeynta IP66 waxay ka dhigan tahay in sheyga si buuxda looga ilaaliyo boodhka iyo walxaha adag. Intaa waxaa sii dheer, badeecada waxaa laga ilaaliyaa diyaaradaha biyaha ee xoogga leh ee lagu saadaaliyay biiyaha (12.5mm) jiho kasta.
IPX4 —— Shayga la qiimeeyay ee IPX4 ayaa laga ilaaliyaa burqashada biyaha xagal kasta.
IPX5 —— Badeecad leh qiimeyn IPX5 ayaa laga ilaaliyaa diyaaradaha biyaha ee lagu saadaaliyay biiyaha (6.3mm) jiho kasta.
IPX7 —— Qiimeynta IPX7 waxay ka dhigan tahay in badeecada lagu quusin karo ugu badnaan 30 daqiiqo qoto dheer inta u dhexeysa 15cm ilaa 1m.
Waqtiga boostada: Sep-10-2020